Amin'ny ora manjombona indrindra
“Nefa hoy Izy tamiko: ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin’ny fahalemeko, mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko” 2 Kor. 12:9
Mety ho kivy ianao, ka ny fikasanao sy ny hevitrao dia nolavina; nefa aoka ho azonao antoka fa tia anao ny Tompo. Mety hidedadeda handoro anao ny afon’ny lafaoro, tsy ho amin’ny tanjona hanapotika anao anefa, fa ny handevina ny tain-drendrika kosa, mba hahatonga anao ho tafavoaka toy ny volamena voadio impito. Raketo tsara ao an-tsaina fa homen’Andriamanitra hira ianao ao anatin’ny alina. Toa mamefy anao manodidina ny haizina, kanefa aoka tsy hijery ny rahona ianao. Ao ambadik’io rahona mitakizina io dia misy hazavana mamiratra mandrakizay. Manana fahazavana ho an’ny fanahy tsirairay avy ny Tompo. Sokafy ny varavaran’ny fon’ny fanantenana sy fiadanam-po ary fifaliana. Izao no lazain’i Jesosy: “Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo” Jao. 15:11
Manana asa manokana hataon’ny tsirairay Andriamanitra, ary ny isambatan’olona dia afaka hanatanteraka tsara ny asa notendren’Andriamanitra hataony. Ny hany zavatra tokony hatahorantsika amin’ny anjara tokony hataontsika dia ny tsy hampifantohantsika mandrakariva ny masontsika eo amin’i Jesosy, dia ny tsy hananantsika afa-tsy maso tokana hanomezana voninahitra an’Andriamanitra, koa rehefa antsoina isika mba hametraka ny fiadiantsika ka hatory ao amin’ny fahafatesana, dia mety tsy ho vonona hanome ny tatitra ny amin’ny fahatokiantsika. Aoka tsy hanadino mihitsy, na dia ao anatin’ny fotoana fohy monja aza, fa ianao dia fananan’Andriamanitra, novidina tamin’ny vidinytsy hita lany, ary ianao dia tokony hanome voninahitra Azy amin’ny fanahinao, amin’ny vatanao, izay Azy avokoa.
Efa nanomana balisama ho an’ny ratra rehetra Andriamanitra. Misy balisama any Gileada, misy Mpitsabo any. Moa ve tsy handinika ny Soratra Masina mihoatra noho izay nataonao tany aloha ianao, anio? Tadiavo ny Tompo hanome anao fahendrena amin’ny fahaterena rehetra. Amin’ny fizahan-toetra rehetra, mitalahoa amin’i Jesosy hanoro anao ny làlana hivoahanao amin’ny olana, dia hisokatra ny masonao mba hahita ny fanafana ary hametaka eo amin’izay zava-manjo anao ireo teny fikasana manasitrana voarakitra ao amin’ny Teniny. Amin’izany fomba izany, ilay fahavalo, dia tsy hahita hirika hitarihana anao ho amin'ny alahelo sy ny tsy finoana intsony, fa ho solon’izany kosa dia hanana finoana sy fanantenana ary herim-po ao amin’ny Tompo ianao. Homen’ny Fanahy Masina fahaiza-manavaka mazava tsara ianao mba hahitanao sy hampiasanao araka ny tokony ho izy ny fitahiana tsirairay izay hiasa ho toy ny fanafody mamono ny fahoriana, ho toy ny rantsana manasitrana ny ozon’ny fangidiana rehetra izay napetraka teo imolotrao .